Macalin Mustafe – myShaqo
Full Course- Perfect English Programme- A1, A2+
English Tense- All Tenses
A1- Upper Level
English Speaking Course- English with Somali translation
English- CEFR B1- Level 1
English- CEFR B1- Level 2
English- CEFR B1- Level 3
Staff Training- Sales Marketing
$30.00 $15.00 per 30 days
Mustafa S.C. S.C. S Madar waa aqoonyahay Soomaaliyeed oo ah English native speaker. Marka la iska reebo khibradiisa macalinimo, waxa kale oo ku takhasusasay horumarka nafta (Self-development) iyo waxa la idhaado “High Performance” oo ah sida shaqaalaha iyo dadka waxqabadkooda loo kobcin lahaa. Mudadu ka shaqaynayay London, UK waxa u soo noqday maareeye, hanti ilaaliye (portfolio manager) iyo agaasime guud shirkadaha ugu tunka weyn Yurub.
Sanadku marku ahaa 2017-kii, Mustafe wuxu iska casilay xilkiisa, waxaanu debeedna ku soo laabtay dalkiisi hooyo si u dadkiisa wax u taro.
Mudane Madar maanta dalkiisa hooyo buu jooga waxaanu ku rajo weynyahay in uu waalihiisa baro luuqadda Af-ingiriisiga iyo xirfade kale si ay uga faa’iidaystaan forsudaha “Internetka” oo shaqo la’aanta dalka ka taagan loo yareeyo.
Mudane Madar waxu ku takhasusay sida shaqalaha waxqabadkooda loo kobciyo (High Performance), Maaraynta Dadka, Hogaaminta (Leadership), Maamulida Shaqaalaha iyo Kheyraadka (Human Resource Management), Istaraatiijiyada, Xeeladaha iyo Fulinta (implementation).
Marka wax kasta la isku soo ururiyo, khibradiisu waxay si toos ah u la xidhiidha horumarinta nafta, horumarinta ganacisga iyo sida dadka arigtooda loo badalo (paradigm shift)
1. Sanadku mark ahaa 2003-dii, Mudane Madar waxa loo igmaday maareeye guud shirkad ka shaqaysa maalgashiga hantida oo ka howlgasha koonfurta London. Isaga iyo kooxdiisa waxay ku guulaysteen in ay natiijado aad u wanaagsan u soo hooyaan shirkada mudo saddex sanadood gudaheed.
2. Bacdamma waxa uu bilooway in uu ka shaqeeyo maalgashiga baangiyada, waxa aanu u shaqeeynayey shirkad ka howlgasha suuqa dhaqaalaha ee Yurub iyo aduunka oo ku sugneed London, Liverpool Street. Shirkadan wuxu u ahaa “senior portfolio manager” waxaanu maamulijiray shirkadan hantiideeda khaaska ah oo loo yaqaano “Grosvenor” ilaa iyo 2008-dii.
3. Sanadku marku ahaa 2010-kii, Mudane Madar wuxu ku biiray shirkad ka mid ah kuwa ugu waa weyn Yurub qaybta loo yaqaano “real estate”.
Shan sanadood ka dib, markay isaga iyo koxdiisu ku gulaystan dhowr riikoord iyo dallacaad badan, waxa loo magacaabay agaasimaha guud ee shirkada qaybta maamusha suuq aad u tartan adaq oo qiimo badan (the London real estate and investment market).
Marka la eego wax barashadiisa, wuxuu haysta shahaadada Bachelor in Business Administration, waxaanu ku hadla 4 luqadood.
Waxe kale u sita shahaadooyin kala duwan o ku saabsan sida loo Maamulu Hantida (property and asset management), Maaraynta Dadka, Maamulida Shaqaalaha iyo kheyraadka, Tababarka iyo Horumarka (training and development), Hogaaminta, Sharciga maalgashiga iyo Hantida. Intaa waxa waheliya fagaare ka hadalka (public speaking) iyo “certificates tiro badan oo la xidhiidha “horumarka nafta” (Self development).